लकडाउनको सदुपयोग : यसरी घरमै रहन सकिन्छ स्वस्थ र खुसी - राेल्पा न्युज
राेल्पा न्युज calendar_today १४ बैशाख २०७७, 7:07 am
घरको चौघेराभित्र बसिरहँदा तपाईंले आफुलाई थुनिएको वा गुम्सिएको महसुष गर्नुभएको छ कि परिवारसँग एकाकार भएको अनुभूत ? यो तपाईंको सोच्ने शैली र काम गर्ने तरिकामा भर पर्छ । यदि तपाईं निस्क्रिय रहनुहुन्छ, कुनै काम गर्नुहुन्न, मनोरञ्जन गर्नुहुन्न भने पक्कै पनि तपाईंको दिनहरु पट्यारलाग्दा छन् ।
तर, तपाईं रमाइलो गर्ने प्रवृत्तिका, रचनात्मक क्षमताका, सक्रिय र गतिशिल हुनुहुन्छ भने तपाईंको लागि लकडाउन गजबको अवसर हुनेछ, परिवारसँग रमाइलो गर्ने । त्यसो त कतिपय शारीरिक अभ्यासले पनि दिक्कलाग्दो दिनहरुलाई रहरलाग्दो बनाउन सकिन्छ ।
विश्व स्वास्थ्य संगठन (डब्ल्यूएचओ) ले समेत प्रति हप्ता १५०–३०० मिनेट मध्यम, गहन र मांसपेशीलाई सुदृढ पार्ने शारीरिक अभ्यास गर्न सिफारिश गरेको छ । हप्तामा कम्तीमा २ दिन यस्तो अभ्यास गर्नु आवश्यक छ । सक्रिय रहनु हाम्रो शारीरिक र मानसिक स्वास्थ्यका लागि महत्वपूर्ण छ । यहाँ शारीरिक रुपमा स्वस्थ रहन गरिने केही ब्यायामका विधिहरु दिइएका छन् ।
– तपाईंको मनमा उत्पन्न हुने जिज्ञासा र तिनका उत्तरहरु दिइएका छन् । तिनलाई मनन गर्नुहोस् ।
– म क्वारेन्टाइन भित्र छु, तर संक्रमित छैन । के मैले शारीरिक गतिविधि सीमित गर्नु पर्दछ ?
-म संक्रमित भएर क्वारेन्टाइनमा बसिरहेको छु । के मैले शारीरिक गतिविधि सीमित गर्नु पर्दछ ?
यदि तपाईं संक्रमित तर एसिम्प्टोमेटिक हुनुहुन्छ भने तपाईंले संक्रमण देखिनुअघि गर्दै आएको शारीरिक व्यायामलाई निरंतरता दिनु पर्दछ । यस समय तपाईं क्वारेन्टाइनमा बस्नु आवश्यक छ । अरूलाई भाइरस फैलाउनबाट रोक्न तपाईंले अरुसँग दुरी कायम गर्नु पर्दछ । यद्यपि तपाईलाई खोकी, ज्वरो वा सास फेर्न गाह्रो भए शारीरिक गतिविधिलाई बन्द गर्नुहोस् । स्वास्थ्यकर्मीसँग तुरुन्तै सल्लाह लिनुहोस् ।
– यस्तो बेला हामी एकअर्कालाई सहयोग गर्न के गर्न सक्छौं ?